Meya weFlorida: Hama dzeTump dzinofanira kugamuchira vanoenda kune dzimwe nyika - TELES RELAY
HOME » kambani Meya weFlorida: Mahofisi eTrump Vanofanira Kugamuchira Migambi
Meya weFlorida: Hotels veTump vanofanira kugamuchira vanoenda kune dzimwe nyika
"Uya navo kumahotera eTrump uye mubvunze mutungamiriri wenyika kuti azarure mwoyo wake neimba yake zvakare," akadaro Broward County Mayor Mark Bogen.
Bogen akati muchitauriri kuti iye nevamwe vakuru vekudzimba vadzidza vhiki ino kubva kuDhipatimendi reMitemo uye yeBorder Protection ye chirongwa chekusunungura mazana emavakasimuka vhiki imwe neimwe munharaunda. .
"Iyi inetso yevanhu. Tichaita zvose zvinobvira kuti tibatsire vanhu ava, "akadaro Bogen. "Kana mutungamiriri wehurumende asingatipi rubatsiro rwemari yeimba uye kupa vanhu ava, achaumba musasa kune vasina pokugara."
Imwe muhofisi wePalm Beach iri pedyo, iyo Trump Beach Resort Mar-a-Lago iripo, yakagamuchirawo chiziviso chakafanana kubva kuBBC, vatariri venzvimbo vakati.
VaSheriff vanoti sangano iri rave richangobva kuzivisa ruwa rwerongwa hwekufambisa. Kaviri pavhiki, 135 vanobva kuEl Paso, Texas, vanoenda kuCorard nePalm Beach.
"Mutungamiri anoda kutumira matambudziko ake kuPalm Beach County. Uye hazvina kunaka, "Palm Beach County Mayor Mack Bernard akaudza CNN musi weChishanu.
CBP: "Hatitoreri munhu kuFlorida"
Musi weChishanu, mukuru mukuru weBBC akati hazvina kurongwa kutumira vanhu vanoenda kune imwe nyika kuFlorida "pakarepo", achiwedzera kuti iyo sangano iri iri mukutaura kwe "kutanga" nenzvimbo dzakawanda dziri munyika. "Emergency plans" kuendesa mapoka evanhu achangobva kutora mhiri mhuri.
"Hatitoreri munhu kuFlorida. Takanga tiri muzvikamu zvokutanga zvekugadzirira munyika yose ... nokuti taive nezvirongwa zvisingatarisirwi nokuti takanga takanyanyisa uye nekuchengeteka kwedu, pamwe chete nekuchengeteka kweavo vatinotakura, hatigone uzvichengetedze mune zvivako izvi, "akadaro mukuru weBBCP nezvezvivako zvekugadzira pamwe nemuganhu weU.S. Mexico.
"Izvo zvinotyisa" ndezvi "kuvabudisa kubva munzvimbo yedu nekukurumidza nekukwanisa uye nekuchengetedza." Izvo zvinotyisa. Zvose izvi zvinopera simba. "
Mukuru wehurumende akati nhamba yepamusoro yevanhu vasina kufambidzana vemhuri uye vana vaduku vanoyambuka muganhu vakanga vapa "kukosha kwakanyanya" mumasangano okugamuchira uye kukamanikidzwa kune dzimwe nyika kuti vaende kune dzimwe nzvimbo. kumatunhu. kuitira kurapwa usati wasunungurwa.
Vhiki yakapera, CBP yakatanga kutakura vatorwa nebhazi uye ndege kune dzimwe mhirizhonga pamwe nemuganhu weUnited States-Mexico "kushandisa zvakanaka kurapa kunovapo nekuchengetedzwa kwemajeri," akadaro. yakashuma CBP.
Kubvira muna May 10, CBP yakatora mhuri kubva kuRio Grande Valley kuenda kuLaredo, Texas, mukuru wehurumende akati, paaitakura vanhu vanoenda kune dzimwe nyika pasi pekuendeswa kune dzimwe nyika uye kuendesa ndege kuDel Rio, Texas uye muSan Diego. 19659002] Vaya vose vakapukunyuka nebhazi kana ndege ndeyemhuri uye vakazotanga kubatwa neukama hwehupombwe uye vanoiswa kuongororo yezvechiremba kuti vave nechokwadi chokuti vane mvumo yekurapa kuba, maererano nehupfumi .
Mutungamiri weBBCP akati zviremera zvakatsvaga nzvimbo dzakapoteredza nyika iyo CBP yakagadzirisa zvivako uye mapurogiramu akakwana emakombiyuta ekugadzirisa vatorwa pavanosvika. Nzvimbo idzi dziri kunyanya dziri pedyo nechekuchamhembe uye kumhenderekedzo yegungwa, akadaro mukuru wehurumende.
Mukuru wehurumende anoramba kuti zvirongwa zvekudaidzira zvinoshandiswa zvinotarisana nemaguta matsvene, izvo zvaizoenderana nemutungamiri weHurumende Trump kutumira vanhu vanoenda kune dzimwe nzvimbo nzvimbo tsvene.
"Tose tiri kutarisa ikozvino kukwanisa uye bandwidth yemakombiyuta, uye makombiyuta anokwanisa kushanda," akadaro maneja.
Vatongi vemitemo vanopa mhosva
Vaverengi vezvemitemo vanomiririra Florida muCongress vakati zvinhu zvacho zvaisipo - kunyange vakatsinhanisa mhosva kune munhu ari kutarisira mamiriro acho ezvinhu.
Republican Senator Marco Rubio akati akanga atumira mutsamba yemibvunzo pamusoro peChitevedzeri Munyori weHumaneland Security Kevin McAleenan.
Ihofisi yeRepublican Senator Rick Scott yakati maDocrocrates vaiti mhosva yekuramba kugadzirisa dambudziko Scott irikumbira mamwe mashoko kubva kumakurukota emunharaunda, White House uye Dhipatimendi reHumeland Security.
Mumiriri weDemocratic Republic, Ted Deutch, akatsoropodza zvaaitsanangura se "kudengenyeka kwevhiringidzi" pamusoro pehutungamiri hwekushambadzira kwenyika. 19659002] "Mharaunda yedu yakasiyana inobata vatorwa nekuremekedza nekuremekedza; Vatungamiri vanofanira kuita zvakafanana, "akadaro muchitauriri. "Inotanga nepurogiramu inofungisisa pane kungoita chisarudzo chisingaiti chakaitwa nevamwe nhengo dzehutungamiri pasina kubvunzurana nehumwe hurumende."
Pakutanga mwedzi uno, CBP yakatsanangura vanhu vakawanda vakanga vabatwa. kupera mutemo muganhu weUnited-Mexico panguva ino yegore rezvemari kubvira chero basa chero ripi zvaro kubvira 2009. Mutungamiri weBBCP wakati musi weChishanu, sangano racho rainge rawana huwandu hwevanhu vane 4 500 mumazuva manomwe apfuura.
Uye kwemwedzi yakawanda, sangano racho rakaita rwiyo rwemaawa apo rinotarisana nehuwandu hwemhuri uye vana vanoyambuka muganhu - kuchinja kubva kumakore akapfuura, apo varume vakuru vasina kuroorwa vakaumba nhamba huru kutya pamuganhu. Zvivako zvakapfuura simba ravo rose vakadaro vakuru, uye vakakumbira hondo kuti vauye navamwe rubatsiro kuti vatarise nehuwandu .
Aya maguta matsvene pasi pomoto
iyo chirongwa chinorongwa kuti chitumire mapoka makuru evanhu vanoenda kune imwe nyika kuFlorida inouya masvondo mashomanana pashure peTrump vakavimbisa kutumira vanoenda kune dzimwe nzvimbo munzvimbo tsvene, uye nzvimbo dzomunharaunda dzichidzivirira kubatana nevakuru vakuru vehurumende munzvimbo yekutonga kodzero dzevanhu. immigration.
Vatungamiri pakutanga vakaramba kusavapo kwechirongwa ichi. pasi pekunyatsoongorora. Mushure mokunge mutori wenhau wakazivisa kuti chirongwa chacho chakanga chaderedzwa, mutungamiri wehurumende akataurirana kuti aifunga kuongorora zvakare.
"Tinotumira vazhinji kumaguta matsvene" Trump akaudza rally muGreen Bay, Wisconsin, mwedzi wapera . "Havasi kufara kwazvo pamusoro pazvo. Ndinodada kukuudza kuti chakanga chiri pfungwa yangu isina kunaka. "
Hakuchina guta dzvene muFlorida. Uye hurumende dzemitemo dzakabvumidza kurambidzwa kwemaguta matsvene mumwedzi uno.
Bernard, Democrat uye Meya wePalm Beach County, vakataurira CNN musi weChishanu kuti akatarisira zvikonzero zvekutakura vatorwa vakanga vasina zvematongerwo enyika.
Hapana hunoita zvezvematongerwo enyika, "akadaro," nokuti tiri kutarisana nenhau dzisina pokugara, dzimba, mhepo inopisa muPalm Beach County, hatisi kufunga nezvematongerwe enyika. Tinotsvaka kusangana nezvido zvevagari vedu. "
Bernard akati aitarisira kuti vatungamiri vaizogadzira hurongwa huri nani hwekutarisana nemamiriro acho ezvinhu. Uye vateresi vomunharaunda, anoti, haafaniri kubhadhara chikwereti.
CNN's Jamiel Lynch, Rosa Flores, Kevin Conlon, Tina Burnside, Priscilla Alvarez, Geneva Sands, Brianna Keilar naKikiki Carvajal vakapa mutsara uyu mushumo.
Nyaya iyi yakatanga kutanga https://www.cnn.com/2019/05/17/politics/florida-mayors-migrants/index.html
Flynn akasangana naChoop Mueller apo aishanda pamwe nemutevedzeri chaiye